Home YURUB IYO YURUB Jesse Lingard Storyhood Sheeko Xogta Warka Xogta Lahaa
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Dabberman". Jesse Lingard Childhood Story Story iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ka mid ah dhacdooyinka la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, hase yeeshee dad badan ayaa ka fikiraya Jesse Lingard Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Bilawga Hore ee Nolosha iyo Shaqada
Jesse Lingard wuxuu ku dhashay 15th Diisembar 1992 ee Warrington, Boqortooyada Ingiriiska.
Waxa uu ku biiray William Beamont Community High School oo ku yaala Liverpool iyo Manchester. Halkaan ayuu ahaa markii ugu horeysay ee uu arkay isla markaana uu horumariyay tayadiisa kubada cagta sida ilmo yar.
Jesse waxay ka fiicnayd waxqabadyada ciyaaraha ee iskuulka. Kadibna, wuxuu ahaa kan ugu quruxda badan iyo ciyaaryahanka ugu fiican ee bidixda. Waxa loo arkay inuu leeyahay karti iyo xirfad weyn. Waalidkiis waxay qaadeen talaabo geesinimo leh iyagoo saxiixay Penketh United Academy. Waxay mar dambe u wareejiyeen Manchester United Academy ka dib markii ay barteen kubada cagta ee looga baahan yahay kubada cagta.
Jesse ayaa ku biiray akadeemiga Manchester United isagoo da'diisu gaartay toddobo sano, waxaana uu ku soo barbaaray kooxda da'diisa. Waxa loo yaqaanay ilma yar oo leh wadnaha geesinimo leh.
Jesse Lingard si fiican ayuu u ciyaaray sababtoo ah wuxuu daawaday wax badan Andres Iniesta clips inta koraysa. Tani waxay ka caawisay inuu ku fiicnaado sidii uu kor ugu qaadi lahaa horumarinta dhallinyaradiisa. Qalbigii yaraa ee geesinimada ayaa ahaa mid aad uwanaagsan intii uu ku jiray xirfadiisa dhalinyarada isagoo ah ciyaaryahanka ugu yar ee dhalin kara ciyaaryahano waaweyn oo adduunka ka mid ah.
Isaga, wada jir Paul Pogba wuxuu ka mid ahaa kooxdii Manchester United ee ku guuleysatay Koobka FA Youth Cup ee 2010-11 ee Manchester United Academy.
Jesse Lingard: Maalmaha Shaqada Dhalinyarada ee Paul Pogba iyo Friends
Horyaalka uu ku guuleystay wuxuu u ogolaaday inuu qandaraas xirfad ah u saxiixo United xagaagii 2011. Inta kale ee ay sheeganayaan hadda waa taariikh.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Laga soo bilaabo waxa ay u muuqato, Jesse Lingard wuxuu ka yimaadaa celcelis qoys qoyskiisa. Waalidiintiisa, oo loo yaqaana Mr iyo Mrs Lingard laguma yaqaanaan faafaahintooda, intaa ka sii dheer, waxay u ogolaanayaan warbaahinta inay ku biiraan. Warbixinnada waxay muujinaysaa in Jesse uu ka maqnaa aabihiis iyo hooyadiis inta badan noloshiisa. Tani waxa ay dhacday xilli uu si qoto dheer uga dhex muuqday raadinta xiddigihiisa kubada cagta ee United.
Si kastaba ha ahaatee, hooyada Jesse Lingard hooyadeed ayaa mar kale shaaca ka qaaday in xiddiga United uu ku faraxsan yahay sida ilmo yar.
Tani waxay dhacday markii Jesse ay kala soocday Q & A oo qosol badan ka hor Maalintii Hore.
Jilayaasha Jennifer Aniston, Angelina Jolie iyo Jennifer Lopez ayaa inta badan ku jira magacyada la siiyay.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Saaxiibkii hore ee Manchester United Jesse Lingard ayaa ku dhuftay inuu siinayo bootin (ka dib markii uu tuuray) ka dib markii uu ku dhuftay waqti weyn oo uu noqday wiil weyn.
Emma Hyde ayaa sheegtay in ay u maleyneysay in kubada cagta ay tahay jaceylka nolosha. Waxay sheegatay inay xitaa ka tagtay shaqadeeda si ay u nuujiso iyada oo dhaawac ah oo uu ku jiray xirfadiisa dhalinyarada.
Emma Hyde ayaa sidoo kale sheegtay in ay bixisay biilasheeda oo ay nolosheeda ku haysatay muddo shan sano ah si ay u caawiso markii uu ahaan jiray ciyaaryahan akadeemiyadda ah.
Waxay u sheegtay dhaleeceynteeda in kadib Jesse waxay ku afduubtay foorashadii xiriirka ay la lahayd, waxaa lagu qasbay inay ka tagto guri uu kiraystay. Waxa kale oo ay sheeganeysaa mootooyin raaxo leh oo uu siiyay gabadheeda oo ay ku guuldareysato inay galaan naadiga Manchester habeenkii markii Jesse uu jiro.
Mid ka mid ah ninkeeda ayaa yiri: "Emma Emma waxay la xiriirtay bilayska, laakiin waxaa loo sheegay in gaariga uu ka tirsan yahay Jesse oo loo qaaday furaha, sidaa darteed ma jirin xatooyo. Waxay ka yaabtay in Jesse laga yaabo inuu maskaxdiisa dhiibo si uu uga soo qaado baabuurkiisa. "
Emma wuxuu yiri ...: "Waxaan u maleynayay inaynu guursan doonno. Waxaan u maleynayay in Jesse uu yahay kan. Waqtigeygii ugu xumaa nolosheyda ayaa igu dhacay. Anigu ma rumaysan karo inaan sanado badan ku khasaaray oo kaliya isaga oo igu tuuray markii uu bilaabay samaynta lacagta. "
Emma oo wali xanuunsan, ayaa rajeynayay inuu dib u heshiisiin ah ka dib markii ciyaaryahanka uu ka soo laabtay xagaagii ka yimid Miami. Waxay ahayd arrin la yaab leh Jessi mar kale way waydiisatay. Laakiin ka dib markii taariikhda jimicsiga-ama-jebinta uu muujiyay kaarka cas ee - iyo waxyaabihii la sheegay in ay u noqdeen mid dhan. Taasina waxay ahayd dhammaadka kama dambaysta ah. Jesse wuxuu ahaa shaki mar walba.
Saaxiib ayaa dhawaan yiri: "Emma waxay doonaysaa inay dadku ogaadaan inayan dahab ahayn. Waxay ahayd mid isaga taageera muddo sanado ah. Jesse waxay joogtay gurigii Emma ee Sale, waxay ahayd caawiye maamulaha dukaanka dahabka ah waxayna bixiyeen biilasha gurigooda. Tani waxay ahayd wakhti Jesse ah oo la siiyay lawska oo uu mushahar ka qaatey kooxda akadeemiyadda ".
Edinson Cavani, Raheem Sterling, Karim Benzema waxay leedahay waayo-aragnimo isku mid ah oo isku mid ah sida Lingard.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Maqnaansho Ronaldo
Cristiano Ronaldo hadana had iyo jeer ma aha adduunka caalamiga ah ee uu hadda yahay. Laakiin marwalba waa uu ku fiicnaa, lana wadaagay taladiisa markii uu joogay Manchester United. Sawirka hoose ayaa muujinaya xaqiiqda ah in Ronaldo uu mar uun tababare u noqdo Lingard. Su'aasha ugu dambeysa waa; Miyuu xiddiga reer Portugal ku takhasusay qaab ciyaareedkiisa?
Sawirka kore waxaa lagu qaaday 2003. Daawo video hoosta;
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Gawaaridiisa
Lingard waxaa loo arkay in la geynayo Bentley Continental GT cusub.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa sidoo kale waxa uu heystaa £ 120,000 Range Rover Sport isaga oo soo ururiyay. Range waxay la timaadaa mid caan ah. Qayb ka mid ah sawirka hoose ayaa muujinaya in Jesse uusan helin wakhti uu ku nadiifin lahaa nadiifinta Range Reven.
Waxa uu sidoo kale ku daray 80,000 Mercedes C63S AMG in uu ururinta. Dhamaan seddexda gawaarida waxay ku faanaan xirmooyinka jirka ee caadada ah.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Dabeylka dabka
Jesse Lingard wuxuu qoob-ka-cayaaraha 'dabka' u soo bandhigay kubadda ingiriiska isagoo dabaaldegaya goolkii ugu horeeyay ee dabaaldega St James 'Park bishii January, 2016. Daawo Video hoos ku xusan;
Dabcan waa dabeecad ka timid Maraykanka, waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay koox ka tirsan Atlanta oo lagu magacaabo Migos, inkastoo ay kaliya ku noqotay fayruus Mareykan ah markii uu ka tagay Carolina Panthers bilowgii xilli ciyaareedka. NFL.
Tan iyo markaas, dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka ayaa sidoo kale waxaa sameeyay qaar ka mid ah xiddigaha isboortiga Mareykanka oo ay ku jiraan halyeeyga kubadda kolayga LeBron James. Xitaa Hillary Clinton, oo ah musharax u noqon kara madaxweynaha soo socda ee Mareykanka, ayaa isku dayay qoob ka ciyaarka intii lagu jiray muuqaalka telefishanka.
Waxa ay aheyd Paul Pogba, kaasoo dabka ka dhex qarxiyay Serie A iyadoo Juventus ay u muuqatay sida Jesse ugu horeysay ee uu u arko calanka.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Waa maxay sababta uu ujoogaayo: 14
Waxaan u maleyneynaa inay tahay tiro aad u badan. Sida iska cad, [weeraryahankii hore ee Arsenal] Thierry Henry waxay leedahay oo waxay noqotay tiro aad u weyn kubadda cagta. Wuxuu daawaday Andres Iniesta fiidiyow laakiin Thierry Henry dhab ahaantii wuxuu ahaa Idol.
Jesse Lingard's Idol
"Wuxuu ahaa gooldhaliye weyn markii aan yaraa" ayaa Yesse ku yidhi. "Waxaan u isticmaali jiray isaga oo aan daawado inta badan goolashiisa sidaa darteed waxaan qabaa '14' waa lambar wanaagsan" Jesse ayaa xaqiijiyay.
Jesse Lingard Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Kaliya Badbaadiyaha
2011, kooxo dhalinyaro ah oo Manchester United ah ayaa ciyaaray ciyaartoyda sida Paul Pogba, Ravel Morrison, Michael Keane iyo Tyler Blackett.
Kaalay guushii FA Cup ee 2016, Lingard wuxuu ahaa xubin keliya oo kooxda ka mid ah kooxdii United ka tagtay ilaa maalintaas qorista.
Jesse waxaa loo arkaa inuu yahay wiilkii ugu dambeeyey ee badbaaday ee 2011 / 2011 Manchester United Kooxda Dhalinyarada.
Somali War Saxaafadeed
Ashley Barnes Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Ayomid cajiib ah Disember 15, 2018 X XXX: 2 am
Lingard waa cayaaryahan aad u wanaagsan waxaana jeclahay isaga.
Charlie Austin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta